Ukujongwa kunye nemizobo yejoni elineminyaka engama-21 ubudala kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa sasingenazo ii-smartphones ezineekhamera ezizodwa, ukubanakho kokukwazi ukukhusela umzuzu othile ngetalente yomzobi wekhathuni okanye umzobi. Ukufota kukwazile ukubamba la maxesha, kodwa ngamanye amaxesha, anje ngeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ipensile kunye nencwadana yokubhalela inokuba sesona sixhobo sibalaseleyo sokubamba la maxesha ahleliyo.
Yile nto wayeyicinga uVictor Lundy, umfundi wezokwakha owangena emkhosini ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Endaweni yokushiya icala lakhe lokuyila ngakumbi, ijoni eliselula Ndenze isigqibo sokubhala amava abo kwibala lemfazwe ngothotho lweencwadana. Kuzo, wabhala yonke into evela kumajoni abulewe emfazweni, uqhankqalazo lomoya nayo yonke into esiyaziyo kumaxwebhu aloo mfazwe.
Akahlalanga nje kwezona mfazwe zininzi zala maxesha, kodwa wayeyazi indlela yokuzisa kwimemori yangoku amajoni aphumle okanye adlala kwimidlalo ngexesha labo lasimahla.
Imizobo yakhe, eyenziweyo phakathi kukaMeyi noNovemba 1944, isibonisa Ukuthinta ngakumbi kunye nokusondelelana kwemfazwe enegazi kwimbali. U-Lundy, ngo-2009, kwaye eneminyaka engama-92 ubudala, wanikela ngeencwadana zakhe kwiThala leeNcwadi leCongress. Zonke iincwadi zeencwadana ezisibhozo ziye zavavanywa ngokwamanani ukusukela ngoko kwaye, yiyo loo nto singafikelela kuzo namhlanje ukuzijonga kwi-Intanethi.
Ngummangaliso omkhulu ukuba uthungelwano lwenethiwekhi luthetha, esinokuthi sikwazi ukufikelela kulo entendeni yesandla sethu, kwifowuni ephathekayo, ukuya loo mizuzu yaphila Kwelo joni lalifuna ukulikhuphela ukuze kwixesha elizayo, nabani na, ngoku angamawaka abantu, abe ngamangqina kuloo mfazwe inenkohlakalo kwaye inegazi.
Ungafumana olunye ulwazi kusuka Library of Congress ukufikelela kuyo yonke imizobo yakhe kunye nememori.
Sikushiya ne Imizobo kaOscar de la Renta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Incwadi yemizobo yejoni elineminyaka engama-21 ubudala kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi
Isixhobo esitsha se-Invision sokutshintsha ngokulula ukusuka kuyilo ukuya kuphuhliso